Vibharam Hospital ဝိဘာရာမျဆေးရုံ, Bangkok (2021)
မွနျမာပွညျမှ ဆေးကုသမှုလာရောကျခံယူသော သူမြားအတှကျအဆငျပွခြေောမှစေ့ရေနျရညျရှယျပါသညျ။
ဝိဘာရမျဆေးရုံကွီးမှာ ကိုဗဈအတှငျး ဆေးကုသမှု လာရောကျခံယူခငျြကွတဲ့ မိတျဆှမြေားအတှကျ ဆေးရုံမှာနပွေီး Quarantine ၁၄ ရကျ ဝငျရမယျ့ Package လေးနဲ့ မိတျဆကျလိုကျပါတယျ
လူနာ တဦး အတှကျ ဘတျ ၅၀၀၀၀ ကသြငျ့မှာဖွဈပွီး Covid 19 PCR test ကို ၃ ကွိမျစဈဆေးခွငျး အပါအဝငျ
ဆေးရုံမှာ ၁၅ ရကျနထေိုငျခွငျး အခနျးနဲ့ သူနာပွုဝနျဆောငျမှုမြား
နစေ့ဥျ အဖြားတိုငျးခွငျး၊ သှေးပေါငျခြိနျခွငျး
တနေ့၃ကွိမျ အစားအသောကျမြား ပါဝငျပါတယျ
Relief flight နှငျ့ ထိုငျးသံရုံးတို့အတှကျ လိုအပျတဲ့စာရှကျစာတမျးအပွညျ့အစုံကိုလညျး ပေးပို့ပေးမှာ ဖွဈပါတယျ
July 1st က စပွီး Thai ကိုဝငျဖို့ ပထမ ဦးစားပေးတဲ့အထဲမှာ ဆေးလာကုမယျ့ လူနာတှကေိုလဲ လကျခံမယျလို့ပါပါတယျ
ထိုငျးကိုဝငျရငျ Quarantine 14 ရကျ(ပွနျရငျလဲ မွနျမာမှာ 21ရကျ) ဝငျရမှာဆိုတော့ အရမျးအရေးကွီးတဲ့လူနာ မဟုတျရငျ လာဖို့ကို တျောတျောစဥျးစားကွမှာပဲ
ထိုငျးအစိုးရက ပုဂ်ဂလိကဆေးရုံ တှကေို Alternative Hospital Quarantine ဆိုတဲ့ ဆေးရုံမှာပဲ Quarantine နရေငျး ကုသမှုခံယူတဲ့ အစီအစဥျတှကေို ပွငျဆငျထားဖို့ ညှနျကွားထားပါတယျ
အရေးကွီးလူနာဆို စရောကျရောကျခငျြး covid test စဈပီး negative ဆိုတာနဲ့၂ရကျအတှငျး ဆေးကူသမှူလုပျငနျးစဥျစလို့ရနိုငျအောငျ ညှိနှိုငျးထားပါတယျ
ကြှနျတျောတို့ဆေးရုံလဲ AHQ package အတှကျ စီစဥျထားပါတယျလို့ လူနာအဟောငျးမြားနှငျ့ ဆေးလာကုခငျြသောမိတျဆှမြေားကို အသိပေးအပျပါတယျ
အသေးစိတျအခကျြအလကျမြားကို Chat Box သို့မဟုတျ Viber မှတဆငျ့ လာရောကျမေးမွနျးလို့ရပါတယျ
တှဲဖကျပါမောက်ခဒေါကျတာ စီရီ သညျ လကျရှိဘုရငျ့ဆေးရုံကွီး (Chulalongkorn Hospital) ၏နှလုံးခှဲစိတျဌာနတှငျလကျရှိ တာဝနျထမျးဆောငျလကျြရှိသညျ့အပွငျ နှဈပေါငျး ၂၅နှဈ အတှငျး နှလုံးခှဲစိတျမှုပေါငျးမြားစှာကို ခှဲစိတျခဲ့ပွီးဖွဈပါတယျ။
အထူးကြှမျးကငျြသော ခှဲစိတျမှုမြားအနနေဲ့ကတော့ နှလုံးသှေးကွောလှဲခှဲစိတျမှုမြား (Coronary Artery Bypass Graft) နှငျ့ နှလုံးအဆို့ရှငျနှငျ့ဆိုငျသောအစားထိုးခှဲစိတျမှုမြား (Valve repair and replacement Surgery) တို့ဖဈပါတယျ။
ဆရာကွီးနှငျ့စမျးသပျဆှေးနှေးတိုငျပငျလိုပါက ရကျခြိနျးယူရနျ Chat box မှသျောလညျးကောငျး +66995026124 ကို Viber သို့မဟုတျ တိုကျရိုကျဖုနျးချေါ၍လညျးကောငျး ဆကျသှယျနိုငျပါတယျခငျဗြာ။
အရမျးတနျတဲ့ အထူး Promotion
ဘတျ ၁၁,၀၀၀ ကို မှ တယောကျစဈ တယောကျအခမဲ့ဆိုတော့ မွနျမာငှေ ၅သိနျးခှဲ ဝနျးကငျြပဲကသြငျ့မှာပါ
Promotion လေးက ဒီဇငျဘာလကုနျ အထိပဲရှိမှာပါ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ အထွဋ်အမြတ်ထားရာ ဝါဆိုလပြည့်
ဓမ္မာစကြာင်္အခါတော်နေ့မှာ သတ္တဝါအားလုံးစိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေလို့ ဝိဘာရာမ်မြန်မာမိသားစုမှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း Check up program ကို အမျိုးသားကို ဘတ် ၁၃၀၀၀ (၆သိန်းခန့်) နှင့် အမျိုးသမီး ဘတ် ၁၄၅၀၀ (၇သိန်းခန့်)သာကျသင့်မှာဖြစ်လို့ ဈေးအရမ်းတန်နေပါပြီ။ July လ တလလုံးအတွက်သာ Promotion ဖြစ်လို့ မြန်မြန်သာ ဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်။
၂ဦးစစ်လျှင်လည်း ၅% discount ရအုံးမှာဖြစ်လို့ဒီထက်ပိုတန်တာမရှိတော့ပါဘူးနော်။
ဒါ့အပြင် package ထဲမှာ လေဆိပ်အကြိုအပို့နှင့် တည်းခိုရန် ကွန်ဒို ၂ ရက်ပါပြီးသားဆိုတော့ ဟိုတယ်သပ်သပ်ငှားစရာမလိုတော့ပါဘူးခင်ဗျ။
သူများနှင့်မတူ တမူထူးခြားသောService များကတော့
- စကားပြန်သပ်သပ်ငှားစရာမလိုပဲ ဆေးရုံရှိ မြန်မာဆရာဝန်များမှ ရောဂါအခြေအနေများကို အထူးကုဆရာဝန်များနှင့်လိုက်လံဆွေးနွေးပေးခြင်း။
- Myanmar team တခုလုံးမှ ဆေးကုသမှူလာရောက်ခံယူသောသူများအား မိတ်ဆွေရင်းချာကဲ့သို့ မိသားစုစိတ်ဓာတ်ဖြင့် အစစအရာရာ လိုလေသေးမရှိအောင် ကူညီပေးခြင်း။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Chat box မှသော်လည်းကောင်း
Viber (+66-995026124) မှသော်လည်းကောင်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3/5/19 မန္တလေး Hospital Expo မှ အမှတ်တရများ
page Like and Share ပြုလုပ်ရုံဖြင့် Lucky Draw ကံစမ်းနိုင်ပါပြီ။
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း မှန်ပြောင်း (GastroColonoscopy) ကူပွန်များ
Check up Package (2persons) ကူပွန်များ
10% Discount Coupon ကူပွန်များနှင့်
အမှတ်တရ ထီးများနှင့် တဘက်များ ပါဝင်ပါတယ်
မနက်ဖန် ပွဲတော်နောက်ဆုံးရက်လေးမို့ လာရောက်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပ်တယ်နော်
မြန်မာတို့၏နှစ်သစ်ကူး အခါသမယ သင်္ကြန်အချိန်အခါမှာ လူတိုင်းအားလုံး ဘေးဘယာကင်းကွာ၍ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေကြောင်း ဝိဘာရာမ် ဆေးရုံ မိသားစုမှ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့အပ်ပါတယ်
Vibharam Hospital ဝိဘာရာမျဆေးရုံ updated their phone number.
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း (Gastroscopy and Colonoscopy)
အထူး Promotion - 22,000 ဘတ် ( March 31 အထိသာ)
အစာအိမ်မှန်ပြောင်းက ဘာတွေကိုကြည့်ရှုပြီး ဘာရောဂါတွေကို သိရှိနုိုင်မလဲ?
- ပါးစပ်မှစ၍ အစာအိမ် လမ်းကြောင်းတောက်လျှောက် ရောဂါများဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာ, အလုံးအကျိတ်, အစာအိမ်အနာများ,
- အသည်းခြောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ အစာရေမြိုပြွန်သွေးကြောထုံးခြင်းများ
- အစာအိမ်အနာဖြစ်စေတတ်တဲ့ H. Pylori ရောဂါပိုးစစ်ဆေးခြင်း
- ဗိုက်မကြာခဏ အောင့်တတ်တဲ့သူတွေ
- ရင်ခေါင်းတောင့်, အစာမကြေ, အစာအိမ်အချဉ်ပြန်နှင့် ပျို့အန်တတ်တဲ့သူတွေ
- အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး, သွေးကျဲဆေးများကို ကာလကြာရှည်စွာ သောက်သုံးနေတဲ့သူတွေ
အစာအိမ် မှန်ပြောင်းကြည့်ရင် နာမှာလား? အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ?
ဆရာဝန်မှ မှန်ပြောင်းမထည့်မှီ ပါးစပ်ကို ထုံဆေးဖျန်းပြီး အိပ်ဆေးပေးထားမှာ ဖြစ်သည့်အတွက် လုံးဝနာကျင်ခြင်းမရှိပါဘူး
ပျမ်းမျှ အချိန် ၁၀ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်ခန့်သာကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်
အစာအိမ်မှန်ပြောင်း ဈေးနှုန်း - ၁၃,၀၀၀ ဘတ်
- အူသိမ်မှစ၍စအိုအထိ အူလမ်းကြောင်းတလျှောက်ရှိ အလုံးအကျိတ်နှင့် အနာများစသည်တို့ကို သိရှိနိုငိပါတယ်
- ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ အလုံးများတွေ့ရှိခဲ့ရင်လည်း မနာမကျင်ပဲ တခါတည်းဖြတ်တောက်ကာ အသားစယူစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်
- အသက်၅၀ ကျော်တဲ့သူတွေ
-ဝမ်းသွားတဲ့အလေ့အထ ပြောင်းလဲတဲ့သူတွေ( ဝမ်းချူပ်လေ့ရှိတဲ့သူက ဝမ်းလျှောခြင်းဖြစ်လာခြင်း)
- အကြောင်းအရင်းတစုံတရာမရှိပဲ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်း, မောပန်းနုံးချိနေခြင်း
အူမကြီးကင်ဆာရဲ့ ကနဦးတွင် မည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာမှ မပြတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အသံတိတ်လူသတ်သမားလို့ ခေါ်ဆိုကြပါတယ်
- ရောဂါလက္ခဏာစတင်ပြီး ကင်ဆာရောဂါဟုသိရှိတဲ့အချိန်မှာ အများအားဖြင့် နောက်ကျနေတတ်ပါတယ်
မှန်ပြောင်းကြည့်ရင် နာမှာလား ?အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ
- ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းအိပ်ဆေးပေးထားမှာဖြစ်သည့်အတွက် နာကျငိမှု မခံစားရပါ
- ပျမ်းမျှ ၃၀ မိနစ်မှ ၄၀ မိနစ်ခန့် ကြာနိုင်ပါတယ်
အူလမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်း အထူးဈေးနှုန်း ၁၆,၀၀၀ ဘတ်
hospital expo မှ ပုံရိပ်တချို့ပါ
Hospital Expo မှ အမှတ်တရပုံရိပ်များ
မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များအား အလည်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
မန္တလေးမှာ ကျင်းပမယ့် Hospital Expo မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝိဘာရာမ်ဆေးရုံမှာလဲ ပါဝင်ပါ့မယ်လို့ မန္တလေးမှ မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များကို ဖိတ်ခေါ်ကြ်ိုဆိုပါတယ်
အချိန် - အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိ
မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီ
နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ မန္တလေးမြို့
( Buy 1 Get 1 free ) medical check up
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု တစ်ဦးစစ် တစ်ဦးအခမဲ့ရရှိမည့်အခွင့်အရေး 🤗 🤗 🤗
ဆေးရုံ၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Message box မှမေးမြန်းနိုင်သလို 📲📲📲
ထိုင်း Call Centre ဖုန်းနံပါတ်📞📞📞📞 +66992931620 နှင့် +66995026124 သို့ တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆို၍သော်လည်းကောင်း (Viber) မှသော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
**တုပ်ကွေးရာသီ အတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ကာကွယ်ကြမယ်**
ဝိဖာရာမ်ဆေးရုံတွင် SANOFI PASTEUR မှ ထုတ်လုပ်သော 2017 Southern Hemisphere အတွက် H1N1 virus အပါအဝင် Virus4strains ကိုကာကွယ်ပေးသော FLUZONE ထိုးဆေး ရရှိပါပြီ
1 vial of injection က်ို ဆရာဝန်စမ်းသပ်ခ ပါ အပြီးအစီးကို ဘတ် ၁၅၀၀ ခန့်ကျသင့်ပါမည်။
အသေးစိတ်ကို Chat box မှ သော်လည်းကောင်း VIBER +66995026124 မှ လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းန်ိုင်ပါတယ်
ဝိဖာရာမ်ဆေးရုံမြန်မာရဲ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု Check up Package အသစ်ပါ
Basic lab test များ၊ အာထရာစောင်း ဓာတ်မှန် များနှင့် အပိုထပ်ဆောင်းအနေဖြင့်
ဆေးရုံအနီးရှိ ကွန်ဒိုတွင် ၂ရက်တာနေထိုင်ခွင့်အပါအဝင် လေဆိပ်အကြိုအပို့၊ ထိုင်းဆရာဝန်များနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန် မြန်မာဆရာဝန်များ ၊ ထိုင်းစကားတတ်ကျွမ်းသော မြန်မာဝန်ထမ်းများဖြင့် အပြည့်စုံဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်
June လအတွင်း ဝိဘာရာမ်ဆေးရုံကြီးမှာ ဆေးကုသမှု လာရောက်ခံယူကြသော မိသားစုများ ကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်
မြန်မာသင်္ကြန်နဲ့ ထိုင်းဆုန်ကရန် မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာ ဝိဘာရာမ်ဆေးရုံမိသားစုမှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်
မဟာသင်္ကြန်မှာ အားလုံးပဲ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်း ပြည့်စုံကြပါစေ လို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်
ဆေးရုံ ၏အရိုးအကြော ခွဲစိတ်ဆိုင်ရာ ဌာနမှာ ရရှိနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ကုသခွဲစိတ်မှုများဖြစ်ပါတယ်။
ပက်ကေ့ဂ်ျ ခွဲစိတ် ဈေးနှုန်းများကိုလည်း chat box မှ တဆင့်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ဆေးရုံ၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Message box မှမေးမြန်းနိုင်သလို
မြန်မာ Call Centre ဖုန်းနံပါတ် 095171299 နှင့် 01642275
ထိုင်း Call Centre ဖုန်းနံပါတ် +66992931620 နှင့် +66995026124 သို့ တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆို၍သော်လည်းကောင်း Viber မှသော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများအတွက် မှန်ပြောင်းဖြင့်စစ်ဆေးခြင်း ပက်ကေ့ခ်ျများ
အစာအိမ်ကြည့်မှန်ပြောင်းနှင့် အူမကြီးကြည့်မှန်ပြောင်း ၂ မျိုးစလုံးဖြင့် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သော လူနာများအတွက် အထူးဈေးနှုန်း
⏩⏩ 22,000 bahts
OGDS or Gastroscope (အစာအိမ်ကြည့်မှန်ပြောင်း) တမျိုးတည်း ဆိုလျှင် ⏩⏩12,000 Bahts
Colonoscope (အူမကြီးကြည့်မှန်ပြောင်း) တမျိုးတည်းဆိုလျှင် ⏩⏩ 16,000 Bahts
ဖြင့် ဈေးနှုန်းသင့်တင့်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
ဘန်ကောက်မြို့ ဝိဖာရာမ်ဆေးရုံ၏ နှလုံးဌာနမှာ ရရှိနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်ပါတယ်
နှလုံးနှင့်ပတ်သတ်သော Package ဈေးနှုန်းများကိုလည်း မကြာမီ ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ။
ဈေးနှုန်းသင့်တင့်သော Check up package များ လာပါပြီ။
နောက်နေ့များမှာ လည်း တခြား Check up နဲ့ ဆေးကုသမှု Package တွေတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘန်ကောက်မြို့ ဝိဖာရာမ်ဆေးရုံကြီးသည် ကုတင် ၁၅၀ ဆံ့ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံကြီးဖြစ်ပြီး စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ တိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ဘန်ကောက်မြို့၊ ဖက်တနာကန် လမ်းမပေါ်တွင်တည်ရှိကာ သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်နှင့်နီးခြင်း၊ မြို့တွင်းHigh way Rama9လမ်းနှင့် နီးခြင်း၊ Public Transportation အနေဖြင့် Airport Link မိုးပျံရထားဂိတ် Hua Mak station(ဟွာမက်) နှင့် နီးကပ်စွာ တည်ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေစေပါသည်။
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆေးကုသမှုလာရောက်ခံယူကြသော မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် အထူး ပရိုမိုးရှင်းများ၊ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်သော check up package များ၊တခြား package များဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ဝန်ဆောင်ပေးနေပါသည်။
ဆေးကုသမှုလာရောက်ခံယူမည့် မိတ်ဆွေများအတွက် ဆေးရုံရဲ့ ဝန်ဆောင်မှု များကတော့
1. လေဆိပ်နှင့်ဆေးရုံ အကြိုအပို့ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
2. လေယာဉ်လက်မှတ် ဝယ်ယူရန် booking ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ဝယ်ယူပေးခြင်း။
3. ဆေးရုံ၏ အနီးအနားတွင် serviced apartment စီစဉ်ပေးခြင်း။
4. တခြား (ပတူနမ် Pathunam နှင့် စူကူဗစ်Sukhumvit ဧရိယာ တဝိုက်)စသည့် Customer များစိတ်ကြိုက် ဟိုတယ်များ ကိုလည်း ကြိုတင် booking ယူပေးခြင်း။
5. ဆေးကုသမှု လာရောက်မခံယူခင် မိမိ၏ ရောဂါအခြေအနေနှင့်ပတ်သတ်၍ ကြိုတင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် မြန်မာဆရာဝန်များရှိခြင်း။
6. ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးနိုင်ရန် English နှင့် Thai ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သော မြန်မာဝန်ထမ်းများ အလုံအလောက်ရှိခြင်း။
7. မြန်မာလူနာများ၏ လိုအပ်ချက်မှန်သမျှကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည့် ဝန်ထမ်းများထားရှိခြင်း။
8. ဆေးကုသမှုအပြင် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း လည်ပတ်လိုပါက စီစဉ်ပေးခြင်း။
အထက်ပါ ဝန်ဆောင်မှုများသည်ဆေးကုသမှု ခံယူမည့် မိတ်ဆွေ များအတွက် ဆေးရုံမှ စီစဉ်ထားရှိခြင်းဖြစ်သောကြောင့် မည်သည့်အပို Charges မှထပ်ပေးစရာမလိုပဲ ရရှိနိုင်ပါသည်။
ပက်ကေ့များနှင့် ဈေးနှုန်းများကိုလည်း မကြာမီ တင်ပေးသွားပါမည်။
ဆေးရုံ၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Message box မှမေးမြန်းနိုင်သလို
မြန်မာ Call Centre ဖုန်းနံပါတ် 095171299၊ 01642275 နှင့်
ထိုင်း Call Centre ဖုန်းနံပါတ် +66992931620 နှင့် +66995026124 သို့ တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆို၍သော်လည်းကောင်း Viber မှသော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဘနျကောကျမွို့ ဝိဖာရာမျဆေးရုံကွီးသညျ ကုတငျ ၁၅၀ ဆံ့ ပုဂ်ဂလိကဆေးရုံကွီးဖွဈပွီး စတငျဖှငျ့လှဈခဲ့သညျမှာ နှဈပေါငျး ၂၀ တိုငျခဲ့ပါပွီ။
ဘနျကောကျမွို့၊ ဖကျတနာကနျ လမျးမပျေါတှငျတညျရှိကာ သုဝဏ်ဏဘူမိလဆေိပျနှငျ့နီးခွငျး၊ မွို့တှငျးHigh way Rama9လမျးနှငျ့ နီးခွငျး၊ Public Transportation အနဖွေငျ့ Airport Link မိုးပြံရထားဂိတျ Hua Mak station(ဟှာမကျ) နှငျ့ နီးကပျစှာ တညျရှိနခွေငျးတို့ကွောငျ့ သှားရေးလာရေး အဆငျပွစေပေါသညျ။
ယခုအခါ မွနျမာနိုငျငံမှ ဆေးကုသမှုလာရောကျခံယူကွသော မွနျမာနိုငျငံသားမြားအတှကျ အထူး ပရိုမိုးရှငျးမြား၊ ဈေးနှုနျးသငျ့တငျ့သော check up package မြား၊တခွား package မြားဖွငျ့ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုမြား ဝနျဆောငျပေးနပေါသညျ။
ဆေးကုသမှုလာရောကျခံယူမညျ့ မိတျဆှမြေားအတှကျ ဆေးရုံရဲ့ ဝနျဆောငျမှု မြားကတော့
1. လဆေိပျနှငျ့ဆေးရုံ အကွိုအပို့ပွုလုပျပေးခွငျး။
2. လယောဉျလကျမှတျ ဝယျယူရနျ booking ပွုလုပျပေးခွငျး၊ ဝယျယူပေးခွငျး။
3. ဆေးရုံ၏ အနီးအနားတှငျ serviced apartment စီစဉျပေးခွငျး။
4. တခွား (ပတူနမျ Pathunam နှငျ့ စူကူဗဈSukhumvit ဧရိယာ တဝိုကျ)စသညျ့ Customer မြားစိတျကွိုကျ ဟိုတယျမြား ကိုလညျး ကွိုတငျ booking ယူပေးခွငျး။
5. ဆေးကုသမှု လာရောကျမခံယူခငျ မိမိ၏ ရောဂါအခွအေနနှေငျ့ပတျသတျ၍ ကွိုတငျတိုငျပငျဆှေးနှေးနိုငျရနျ မွနျမာဆရာဝနျမြားရှိခွငျး။
6. ကနျြးမာရေးစဈဆေးနိုငျရနျ English နှငျ့ Thai ဘာသာစကားကြှမျးကငျြသော မွနျမာဝနျထမျးမြား အလုံအလောကျရှိခွငျး။
7. မွနျမာလူနာမြား၏ လိုအပျခကျြမှနျသမြှကို ကူညီဆောငျရှကျပေးမညျ့ ဝနျထမျးမြားထားရှိခွငျး။
8. ဆေးကုသမှုအပွငျ ထိုငျးနိုငျငံအတှငျး လညျပတျလိုပါက စီစဉျပေးခွငျး။
အထကျပါ ဝနျဆောငျမှုမြားသညျဆေးကုသမှု ခံယူမညျ့ မိတျဆှေ မြားအတှကျ ဆေးရုံမှ စီစဉျထားရှိခွငျးဖွဈသောကွောငျ့ မညျသညျ့အပို Charges မှထပျပေးစရာမလိုပဲ ရရှိနိုငျပါသညျ။
ပကျကမြေ့ားနှငျ့ ဈေးနှုနျးမြားကိုလညျး မကွာမီ တငျပေးသှားပါမညျ။
ဆေးရုံ၏ ဝနျဆောငျမှုမြားနှငျ့ပတျသတျ၍ အသေးစိတျသိရှိလိုပါက Message box မှမေးမွနျးနိုငျသလို
မွနျမာ Call Centre ဖုနျးနံပါတျ 095171299၊ 01642275 နှငျ့
ထိုငျး Call Centre ဖုနျးနံပါတျ +66992931620 နှငျ့ +66995026124 သို့ တိုကျရိုကျချေါဆို၍သျောလညျးကောငျး Viber မှသျောလညျးကောငျး ဆကျသှယျနိုငျပါသညျ။
รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Vibharam Hospital ဝိဘာရာမျဆေးရုံผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา
ส่งข้อความของคุณถึง Vibharam Hospital ဝိဘာရာမျဆေးရုံ:
ဆေးစဈတာတိကြ မှနျကနျတဲ့ ဆေးရုံကွီး ပါ။